मानिसदेखि जनावरसम्म दृष्टिविहीन रहेको अनौठो गाउँ ! - Birgunj Sanjalमानिसदेखि जनावरसम्म दृष्टिविहीन रहेको अनौठो गाउँ ! - Birgunj Sanjalमानिसदेखि जनावरसम्म दृष्टिविहीन रहेको अनौठो गाउँ ! - Birgunj Sanjal
६ पुष २०७७, सोमबार १२:५४
वीरगञ्ज । संसारमा यस्ता धेरै ठाउँहरु छन्, जहाँ अनौठा र रोचक गतिविधिहरु भईरहेका हुन्छन् । त्यस्तै अनौठो गतिविधिहरु मेक्सिकोमा एक गाउँमा पनि रहेको छ ।
जुन गाउँलाई दृष्टिवीहिनहरुको गाउँ भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ । उक्त गाँउमा बस्ने मानिस मात्र नभई पशुपंक्षीहरु समेत दृष्टिबिहिन रहेका छन् ।
मेक्सिकोको टिल्टेपक नाम गरेको गाँउमा बालबालिकाहरु सामान्य जन्मिए पनि केहि समयपछि उनीहरुको आँखाको दृष्टि हराउँदछ र बालबालिकाहरु अन्धो बन्दछन् । जोपोटेक आदिवासीका मानिसहरु अवस्थित गाउँमा यस्तो अनौठो समस्या देखा परेको हो ।
करिब ७० वटा झुप्रा घरहरु छन् र जनसंख्या ३ सय जति रहेको गाँउका मानिसहरु आफूहरुले सबै अन्धो हुनुमा गाउँमा रहेको एउटा रुखलाई दोषी मान्दै आएका छन् ।
लाभजुएला नामको उक्त रुख हेरेपछि मान्छे मात्र नभै पशुपक्षी सबै अन्धा हुने उनिहरुको भनाई छ । तर वैज्ञानिकहरु भने अन्धोपनाको पछाडि उक्त रुखको कुनै हात नरहेको भन्दै एक प्रकारको विषालु झिंगा रहेको बताउँदै आईरहेका छन् ।
उनिहरुलाई उक्त विषालु झिंगाले टोकेपछि मानिस र जनावरहरुको आँखाको ज्योति हराउने दाबी समेत गरेका छन् । त्यस गाउँका मानिसहरुको घरहरुमा ढोका हुँदैनन् ।